Iindaba - Kutheni inkxaso yentsimbi isetyenziswa ngokubanzi
Sivale i-orden enye yezincedisi zeprops ezilungelelanisiweyo kunye nomxhasi wethu weLatinoamerica kule veki.Bathenge isikhongozeli esinye seenyawo ezingama-40 kwinkampani yethu.
Iipropu ezihlengahlengiswayozisetyenziswa ngokubanzi kwinkqubo yokukhuthaza njengolwakhiwo, izityalo kunye nebhulorho njl njl. Umkhono weProp kunye neProp Nut uyilwe kwaye wenziwa ukulungelelanisa ubude beProp. Ubungakanani bunokuba yi-OEM.Iindawo eziphambili ziquka i-Prop Sleeve, i-Plate, i-G Pin, i-Tripod kunye neNtloko ye-Fork
Iipropu zikwasetyenziselwa ikakhulu ukuhlamba ukubonelela ngenkxaso yethutyana ngexesha lokulungiswa kwezakhiwo okanye umsebenzi wokuguqula izakhiwo eziphezulu ngexesha lolwakhiwo.… Iipropu 'zokutyhala kunye nokutsalwa' ezineepleyiti zeenyawo ezijingayo zisetyenziselwa ukuxhasa umsebenzi owenziwe ngekonkrithi.
I-1.Uluhlu lwesicelo senkqubo yenkxaso yensimbi eguquguqukayo lubanzi, uxinzelelo olufanelekileyo, umthamo ophezulu wokuthwala, onokunciphisa ngokufanelekileyo inani lenkxaso, ukunciphisa iindleko zokwakha, ibha yenkxaso ayibophelwanga ngobungakanani bendiza esisigxina, ngoko ke ukusetyenziswa kwesakhiwo esingaqhelekanga. inqwelomoya ngokukhululekileyo, isithuba sebha yenkxaso, izithuba ezithe nkqo nezithe tyaba zeplanga zinokuhlengahlengiswa ngexesha ngokomthwalo we-slab, intonga yekhonkco enqamlezileyo ayibopheleli ngokusemthethweni.
2.Ngaphantsi komgaqo ofanayo wendawo yokubumba, inkxaso yensimbi ehlengahlengiswayo kune-scaffold ye-bowl buckle, ukusetyenziswa kwentsimbi yombhobho wentsimbi kuncinci, kuphelaCup lock scaffold30%,umbhobho wentsimbi scaffolding20%
3.Intonga exhasayo kwi-formwork site incinci, indawo yokusebenza inkulu, ukudlula kwabasebenzi, kwaye izinto eziphathekayo ziqhutyelwa kakuhle.
I-4.Inkxaso yensimbi inokuphinda isetyenziswe kwaye isetyenziswe kwakhona, kwaye ineempawu zoqoqosho kunye nokukhuselwa kwendalo
Ixesha lokuposa: Jan-11-2022
Izahlulo zesikafula esinemisonto yeBase Jack, H Isakhelo isikafula, Kwikstage Scaffolding Accessories, Plastic Formwork For Column, Ikhonkco le-Ringlock scaffolding Bracket, Amacandelo e-Scaffolding eRinglock,